Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ France Kylian Mbappe Nwatakiri Akụkọ nke Gbasara Akwukwo Nso
Anyị Kylian Mbappe Biography na-agwa gị Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ezinụlọ, Ndị nne na nna, Brothersmụnna, Nwanyị, Nwunye ka ọ bụrụ, Ndụ, Net Worth na Ndụ Nke Onwe.
Na nkenke, nke a bụ nchịkọta akụkọ banyere Mbappe, ndị na-agba ọsọ French nke Bondy. Anyi na-ebido site na mgbe mbu rue mgbe na otu o siri buru onye a ma ama.
Iji nye gị uto nke ụdị itinye aka nke Kylian Mbappe's Biography, nke a bụ ihe ngosi nke usoro ndụ ya.
Kylian Mbappe Biography na Foto - Site na nwata rue mgbe ọ ghọrọ onye ama ama.
Ee, gị na gị maara Mbappe maka ọsọ ọsọ ya na njikwa bọọlụ dị nso. Ọzọkwa, eziokwu ahụ o nwere ike inwe ikike buru ibu na windo oge 2021.
N'agbanyeghị otuto ahụ, anyị ghọtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole tụlere akụkọ ndụ Mbappe dị nkenke.
LifeBogger akwadola ya, maka obi ụtọ ịgụ akwụkwọ gị, na ịhụnanya nke egwuregwu ahụ. Na-enweghị oge ọzọ, ka anyị malite.
Kylian Mbappe Nwatakiri Akụkọ nke:
Maka ndị na-ebido Biography, ọ na-aza aha zuru oke; Kylian Adesanmi Lottin Mbappé. A mụrụ ndị na-agba ọsọ ụkwụ na ụbọchị 20 nke Disemba 1998 na nne ya, Fayza Mbappe Lamari na nna, Wilfried Mbappe, na mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ Paris nke Bondy, France.
Nwa agbọghọ Kylian bụ nanị nwa ọhụrụ (ọnwa isii) mgbe France meriri 1998 World Cup na Stade de France - nke bụ 11km site n'ụlọ ezinụlọ ya. Kylian Mbappe bịara n'ụwa dị ka nwa mbụ nke nne na nna ya.
Zute nne na nna Kylian Mbappe - papa ya, Wilfried na mama ya, Fayza Lamari. Dị ka a hụrụ, ndị ịgba ọsọ sitere na agbụrụ agbụrụ.
Na-etolite na Bondy:
Eziokwu ka ọ kwuru, oge ntorobịa Kylian abụghị nke ahụ na-atọ ụtọ. O tolitere na mpaghara dịpụrụ adịpụ nke Paris (Bondy), bụ obodo ime ihe ike na ọgba aghara na-emebikarị.
Ọgba aghara nke 2005 bụ nke kacha njọ n'obodo ahụ, ebe ọ hụrụ ọkụ nke ọtụtụ ụgbọ ala na ụlọ ọha.
Ezinụlọ Kylian Mbappe tara ahụhụ na ngosipụta ọha na eze na ọgba aghara na obodo Bondy nke France.
Ihe ndị a niile mere na gburugburu ebe ndị nne na nna Mbappe nwere ụlọ ezinụlọ ha. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, Bondy bụ obodo nke ọgbaghara na esemokwu ọha na eze na-agakọ.
Ndị mmadụ na-ewere mpaghara ahụ, nke dị naanị 10km site na Paris, dị ka ebe mpụ maka mpụ na iyi ọha egwu. Nke a gosipụtara Akwụkwọ akụkọ New York Times banyere Kylian Mbappé na Boys From the Banlieues.
N'agbanyeghị na ọ nwere ọgba aghara obodo n'oge ọ bụ nwata, ọdịnihu nke football GOAT nwetara obi ike.
Nke a bụ n'ihi na Wilfried Mbappe, nna ya (onye nchịkwa football) kwere nkwa ichekwa ọdịnihu nwa ya ọbụna n'oge ọgba aghara.
Na-etolite na agbata obi Bondy, nwa agbọghọ Kylian agaghị ahapụ bọọlụ bọọlụ.
Ọchịchọ Mbappe ruru ka ọ na-ewere football ya n'ihe ndina ya ma jiri ya dị ka ohiri isi iji nyere ụra. N'ajụjụ ọnụ, papa ya, Wilfried, kwuru otu oge banyere nwa ya nwoke na-ahụ bọl;
Football Successga nke Ọma abụghị ihe mberede. Dịka nwatakịrị, Kylian enweghị ike ịhapụ bọl bọl nke ukwuu nke na ọ na-eji ya dị ka ihe eji ehi ụra.
“Kylian nwere mmasị karịa football. Echere m na ara na-agba ya. Hụnanya ya maka ya fọrọ nke nta ka m wepụ m ọbụna na m na-ele onwe m anya dị ka onye nchịkwa football.
Ọ na-abanye na ya, 2-4-7. Kylian na-ele ihe niile. Ọ nwere ike ịlele egwuregwu anọ ma ọ bụ ise na esepu. ”
Kylian Mbappe Ezigbo Ezinụlọ:
Nwoke France si n'ezinụlọ na-agba ọsọ egwuregwu nke na-etinye ndụ ha gburugburu egwuregwu.
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ezinụlọ Kylian Mbappe bụ nke nnukwu ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ na Bondy.
Ugbu a, anyị maara mpaghara a dị ka obodo nwere nchegharị nke na-asọpụrụ onye kachasị nwee egwuregwu bọọlụ. Nke a bụ akwụkwọ mmado na ụlọ ebe Mbappe nọrọ oge nwata.
N'otu oge, ezinụlọ Kylian Mbappe nwere ụlọ n'ụlọ a.
Malite na ndị mụrụ ya, onye isi ezinụlọ Wilfried nọrọ ọtụtụ afọ dị ka onye nchịkwa bọọlụ. Fayza Lamari, nne ya, nwere ọrụ ịga nke ọma dị ka onye na-egwu bọl.
Site na mmalite, ndị nne na nna Kylian Mbappe hụrụ na onye ọ bụla n'ezinụlọ ha na-ewere egwuregwu dị ka ọrụ ha naanị.
Jires Kembo-Ekoko, nwa nke Wilfried, bụ ọkachamara n'ịgba bọọlụ. Halfmụnne ya ndị ọzọ agbasowo nzọụkwụ ya.
Ezigbo ezinụlọ Kylian Mbappe:
Onye ọ bụla maara na o si na Bondy, obodo French na mpaghara ugwu ọwụwa anyanwụ nke Paris.
Agbanyeghị, ole na ole maara mgbọrọgwụ ezinụlọ Kylian Mpabbe - nke bụ ihe anyị ga-akọwa n'akụkụ a nke akụkọ ndụ ya.
Maka ndị na - ebido ya, anyị kekọtara agbụrụ ya na mba atọ Africa; Nigeria na Cameroon (site n'aka nna ya) na Algeria (site n'aka nne ya).
Nna Kylian, Wilfred Mbappe, bụ onye Cameroon na mgbọrọgwụ ezinụlọ Nigeria. Ozugbo ọ bụ ebe mgbaba, ọ kwagara Northern France iji chọọ ebe ahịhịa na-acha ahịhịa ndụ. Nne Kylian bụ Fayza Lamari bụ onye Algeria nke sitere na Kabyle.
Kylian Mbappe sitere na agbụrụ ezinụlọ agbụrụ. Anyị nwere ike ịsị na ọ nwere ọbara Algeria, Cameroon na nke Nigeria.
Dị ka mgbasa ozi French si kwuo, Wilfred n'ịchọ inweta ọnụnọ na-adịgide adịgide, lụrụ nwanyị Algerian-French, Fayza Lamari.
Nwanyị ahụ sitere na Kabyle mechara bụrụ nne nke bọọlụ GOAT nke ga-eme n'ọdịnihu.
Mmụta Kylian Mbappe - Ọ gara ụlọ akwụkwọ?
Ọ bụ ezie na football ghọrọ ọkpụkpọ nwata ya, nwata ahụ gara ụlọ akwụkwọ egwu Conservatory site na afọ 6 ruo 11.
Mgbe ọ nọ ebe ahụ, Kylian mụtara ịgụ egwu na ịmụ ọjà. Ọ na-enye onye nkụzi ya, Céline Bognini, maka inyere ya aka ịmụta ihe omume ntụrụndụ ya abụọ kachasị mma (abụ) mgbe football gasịrị.
Laa azụ na ụbọchị, ka onye nkuzi egwu ya duru ukwe, Kylian sonyeere ya ọnụ, ha jikọtara ọnụ na ogige ụlọ nzukọ obodo Bondy. Mpempe akwụkwọ nke abụ dị iche iche - ị kachasị abụ abụ French.
Na - ewepụ obere oge maka egwu, obere Kylian kwuru "MERE" na ihe ndị na-adịghị mkpa dị ka ịga ụlọ akwụkwọ oge niile.
He gara ụlọ akwụkwọ obere oge - ebe ya na ụmụ klas ya nọ William Saliba. Ka oge na-aga, kpakpando PSG malitere ịmalite ịkụ bọl maka ọtụtụ oge ya.
N'ebe a na-azụghị egwuregwu ahụ, Wilfried, nna ya, so Kylian nwee ọmụmụ ihe nzuzo ole na ole. Na nchịkọta, nke a bụ ụzọ Kylian si enweta ụlọ akwụkwọ.
Kylian Mbappe Football Akụkọ:
Kylian Mbappe n'oge ọ bụ nwata - izu ole na ole mgbe ọ sonyere AS Bondy.
Mgbe ọ dị afọ isii, n'afọ 2004, Wilfried debara aha obere Kylian na AS Bondy n'okpuru nlekọta nchịkwa ya - nke pụtara na ọ bụ ebe ọ na-arụ ọrụ.
Site na oge ahụ, mkpokọta elekwasị anya na mmepe football malitere. Dị ka o kwere mee, nwa whiz na-amabu ụzọ malitere inyere AS Bondy aka iwere ihe nrite.
Ọdịnihu Football GOAT malitere iwekọta trophi na nwata.
Site n'enyemaka nna ya, obere Kylian na-etinye uche ngwa ngwa, omume nke mmecha ọgwụgwọ, ọsọ na dribbling. N'ezie, otu n'ime ndị nkuzi ntorobịa ya na AS Bondy, Antonio Riccardi, kwuru otu oge banyere ya;
Oge mbụ m zụrụ Kylian, ị nwere ike ịsị na ọ dị iche.
O nwere ike ime ọtụtụ ihe karịa ụmụaka ndị ọzọ na AS Bondy.
Dribbling Kylian abụrụlarị ọmarịcha, ọ dịkwa ngwa karịa ndị ọzọ.
Ọ ka bụ onye ọkpụkpọ kacha mma m hụtụrụla n'ime afọ iri na ise m na-azụ ụmụaka.
Na Paris, amaara m ọtụtụ talent, mana ahụtụbeghị m onye dị ka ya.
Usoro nne na nna nke nzute ndị dike bọọlụ:
N'ime oge ndị na-abụghị bọọlụ, enweghị ndị enyi na-aga ma ọ bụ na-aga ụdị mmemme ọ bụla maka ụmụaka. Kylian n'adịghị ka William Saliba (nke nna ya na-azụkwa ma na-elekọta) anaghị ebi ndụ dị ka ụmụaka si ebi.
Kama ịga ụbọchị ọmụmụ ma ọ bụ oriri ụmụaka, ndị mụrụ ya nakweere ụzọ dị iche iji zụlite nwa ha nwoke.
Ha chepụtara echiche nke iwere Kylian izute ndị dike bọọlụ. Ihe mbụ Fayza na Wilfried bụ akara ngosi French - Thierry Henry.
Echere na oge ị gaghị echezọ, izute akụkọ akụkọ Arsenal bụ nnukwu ahụmịhe.
N'oge ahụ, Thierry Henry amaghị na ya na nwa nwoke dị afọ 5 ga-agbaji abụọ n'ime ndekọ obodo ya.
Nye Thierry Henry, nke a bụ otu n'ime ụmụaka nkịtị ahụ.
Busgbọ ala nke abụọ na-esote nkwụsị maka nwa ahụ dị egwu ghọrọ atụmatụ iji zute nwoke nwere ezinụlọ sitere na mama ya - Fayza Lamari.
N'oge ahụ ọ zutere Zidine Zidane, obere akụkọ akụkọ Real Madrid maara na nwata nwoke ga-agbagha ndekọ nke Champions League.
Ohh! A sị na ọ bụ Zidane mara onye ya na ya kwụ. Anyị na-eche na ọ na-akwa ụta ugbu a - n'ihi na ọ nweghị ike ịkọ ọdịnihu Kylian Mbappe.
Mmekọrịta Nna na Nwa Na-aga n'ihu na Ọchịchọ Maka Ọnwụnwa Football:
Maka Wilfried, ọ dịghị echere ka nwa ya nwoke ghọọ nwoke tupu ya akwadoe ihe nke ndụ.
Papa ahụ maara ihe ji mmekọrịta ya na Kylian nwee mmekọrịta ịhụnanya - na-agwa ya ihe niile banyere ndụ mgbe ọ dị obere.
N'oge ahụ, mgbe ha na-apụ, ọ bụ mgbe niile banyere mkparịta ụka footballing. Ọ bụ akara nke ezigbo nna-nwa ọbụbụenyi nke onye ọ bụla enweghị ike ịkwụsị.
Kedu ihe Wilfried nwere ike inye Ọkpara ya karịa ihe o nyere. Nke a bụ njikọ nke Nna na Nwa na-ekwekọghị.
Site na ileta nnukwu nwanne nwoke na ikpe Rennes:
N'ụbọchị ndị ahụ, Kylian na ndị mụrụ ya na-eleta Stade Rennais mgbe niile iji kirie Jirès Kembo-Ekoko, nnukwu nwanne ya nwoke (ebe ọ na-egwuri egwu).
N'oge Mbappe ruru afọ iri na ụma ya, Wilfried chere na oge eruola ka nwa ya nwoke hapụ ụlọ ọrụ ya (AS Bondy) maka agụmakwụkwọ ka ukwuu.
N'ihi ya, ọ bụ echiche ezinụlọ maka nwa ha nwoke ka ya na nnukwu nwanne nwoke, Jirès Kembo-Ekoko na Stade Rennais FC jikọọ.
Klọb ahụ kpọrọ Kylian ka ọ nwalee ya - nke bịara n'ụdị asọmpi nchọpụta n'okpuru 12s.
Nke a bụ obere Kylian na-eyi Stade Rennais ngwa iwu. Mara ihe?… O ji aka ya nyere ndị otu ya aka merie asọmpi ahụ.
Na asọmpi ahụ, Kylian dị iche na onye ọ bụla. Lee ka ufodu si lee ya anya n'ihu.
Naanị mgbe asọmpi ahụ gasịrị na dị ka onye na-eme egwuregwu, Kylian ghọrọ ihe kacha mkpa 1 maka ndị otu nchịkọta Rennais.
N'ihi enweghị olileanya, klọb ahụ gara izipu ndị isi ka ha gaa n'ụlọ ezinaụlọ ya iji dọọ Fayza na Wilfried ka nwa ha sonye na agụmakwụkwọ ha.
N'okwu Dréossi - otu n'ime ndị ọrụ Renne;
Anyị gbalịrị ike anyị niile. Ndị otu m gara Bondy ọtụtụ oge iji soro ndị mụrụ ya kparịta ụka. Ha bụ ndị anyị ma nke ọma. Wilfried na Fayza bụ ndị egwuregwu na-atọ ụtọ. Anyị gbalịrị ịnye onyinye, mana anyị enweghị isi. Ihe a na-agbakụta ọnụ bidoro, ma anyị emeriela n’ọsọ ahụ.
Mgbe mkparịta ụka Rennes dara ada, Mbappe mechara kwaga ụlọ akwụkwọ bọọlụ mba France.
Clairefontaine bụ ebe egwuregwu bọọlụ mba France. Ha bụ ọkachamara n'ịzụ ụmụaka kacha mma na mba ahụ dum.
Naanị atụmanya egwuregwu bọọlụ ka enyere ka Clairefontaine gbaa. Kylian Mbappe bụ otu n'ime ndị ahụ.
Site n'ịmụ football n'ebe ahụ, Kylian ghọrọ Halllọ Nzukọ nke Famer. O sonyeere ndị gụsịrị akwụkwọ dị ka Thierry Henry, Nicolas Anelka, Blaise Matuidi, Hatem Ben Arfa na William Gallas.
Na-etinye ọtụtụ egwuregwu dị egwu, nnukwu klọb ndị Europe bụ; Chelsea, Real Madrid, Liverpool, Manchester City na Bayern Munich wdg kpọrọ ya maka ule.
Kylian Mbappe Biography - Roadzọ Na-ewu ewu Akụkọ:
Mgbe ọ dị afọ 12, nwata ahụ malitere njem nke izute ndị otu Europe chọrọ ịnwale ikike ya. Ebe mbụ ụgbọ ala kwụsịrị bụ England.
Mgbe ha rutere ebe ahụ, nne na nna Kylian Mbappe debara aha ụlọ, nke ọ na-ese akwụkwọ ahụaja nke arụsị ya. Cristiano Ronaldo - n’ime ụlọ ya.
Nke a bụ otú ụlọ Kylian Mbappe si dị ka nwatakịrị. Ọ dị ka ọ na-efe CR7 ofufe.
Na ụzọ ụkwụ Chelsea, nwata ahụ nwere obi ụtọ soro England starlet Tammy Abraham na Jeremie Boga.
Mgbe egwuregwu ahụ ebe ndị otu ya meriri Charlton (8-0), Kylian nwere obi ụtọ lara n'ụlọ.
Akụkọ ihe mere eme gosiri na Mbappe gosipụtara uwe elu ya nke Chelsea na-eche na ọ meriri obi klọb. N'ụzọ dị mwute, Chelsea FC akpọghị ya.
Nke a bụ Kylian Mbappe nwere uwe elu Chelsea na kaadị ID. Nke a bụ nanị mgbe ọnwụnwa ya gasịrị maka ụlọ ọrụ jụrụ ya.
Ahụmịhe Realmụaka nke Real Madrid:
Mgbe ahụmahụ England dị mwute, ndị nne na nna Kylian Mbappe kwanyeere ọkpụkpọ oku Zidine Zidane ka ọ gaa Real Madrid.
Mgbe ọ nọ ebe a na-ele ule, o nwetara ohere ahụ ọ na-echesi ike ileta naanị arụsị ya, Cristiano Ronaldo.
N'ikpeazụ, maka nwatakịrị, nnukwu nrọ iji hụ onye ọkpụkpọ ọ na-ele anya iulateomi bịara. Ka oge na-aga, ọbụna CR7 ekwenyeghị na nwatakịrị ahụ ọ hụrụ ga-ama aka ya ike na bọlbụ ụwa.
N'ezie, Kylian Mbappe's Njikọ Njikọ Mbụ bụ otu ihe fọrọ tupu ndị fans amalite iweta ntụnyere dị n'etiti ya na CR7.
Kylian Mbappe Biography - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Mgbe mkparịta ụka na-emezighị emezi n'etiti ọgbakọ ndị Europe na ndị mụrụ ya, nwata ahụ mechara biri na Monaco.
Na ASM, Kylian Mbappe si n'ike gaa n'ike, ihe ngosi nke hụrụ ya ngwa ngwa gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ ha gaa football. Anyị nwetara ụfọdụ n'ime isi mmalite nke AS Monaco.
Iji ọ theụ nke ezinụlọ ya dum, Mbappe bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya - na 6th nke March 2016. N'ụzọ dị mwute, na obere oge egwuregwu, obi na-eto eto nwere nkụda mmụọ.
Okpomọkụ a bịara biri ka nna ya mere mkpọtụ. Wilfried nyere ịdọ aka ná ntị siri ike na nwa ya nwoke ga-achọ maka mbufe na windo Jenụwarị ma ọ bụrụ na ihe agbanweghị.
Naanị mgbe nke ahụ gasịrị, onye njikwa Monaco, Leonardo Jardim, kpebiri ịmalite Kylian megide Montpellier.
Egwuregwu ahụ hụrụ ọganihu Mbappe ka ọ na-etinye aka na mbibi 6-2 nke Montpellier.
Kemgbe ụbọchị ahụ, kpakpando na-arị elu elebeghị anya n'egwuregwu bọọlụ ụwa. Site na ihe mgbaru ọsọ 26 ya na oge 2016-17, Kylian nyeere Monaco aka inweta aha Ligue 1.
PSG na 2018 FIFA World Cup:
Mgbe ịkpọsịrị aha ya na ụwa, nnyefe na-esote. Nke a dugara na nde mmadụ 145 nde gbakwunyere € 35 nde (na mgbakwunye) nnyefe ndekọ ụwa nke Paris Saint-Germain kwụrụ.
N'ụlọ ọgbakọ ahụ, Mbappe zutere ihe nwata dị oke ọnụ site n'inyere PSG aka inweta mmeri atọ, Ligue 1 Player of the Year na onye kachasị nweta goolu.
Na Mee 2018, akpọrọ Mbappe ka ọ sonyere ndị otu France maka asọmpi iko mba ụwa Russia 2018.
N'ime oke mmekọrịta mmekọrịta Antoine Griezmann, ọ ghọrọ nwata nke abụọ, mgbe Pelé, iji akara na World Cup Final - na-enyere France aka imeri asọmpi ahụ.
Mbappe na-egwu egwuregwu ụwa na-ahụ ya ka ọ na-emeri ihe mgbaru ọsọ kachasị elu. Ihe omumu nke oganihu ya na ihe omuma ya n'egwuregwu football huru ya mgbe o di obere.
Karịsịa, ọ bụ ihe ịrịba ama na Kylian Mbappe ga-eweghara Lionel Messi na ọchịchị CR7 dị ka Football GOATs.
N'oge a na-ede akụkọ ndụ ya, Fans kwadoro Kylian ịgwa ụwa ebumnuche ya na atụmatụ ya banyere ịkwaga Real Madrid. Ihe ọ bụla ọdịnihu ga-abụ, ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, ga-abụ akụkọ ihe mere eme.
Eziokwu gbasara Alicia Aylies - enyi nwanyị Kylian Mbappe:
Nwatakịrị nwanyị a - Alicia Aylies - bụ enyi nwanyị na nwunye Kylian Mbappe.
Paragon nke ịma mma bụ ihe atụ nke malitere ọrụ ya na ụlọ ọrụ Guyanese Mannky'n.
A mụrụ Alicia Aylies na 21st ụbọchị nke Eprel 1998 na nne ya, Marie-Chantal Belfroy, na nna, Philippe Aylies. A mụrụ ya na agwaetiti Caribbean nke Martinique, French ókèala mba ọzọ.
Nwanyị nwanyị Kylian Mbappe bụ naanị nwa nke ndị mụrụ ya. Nna ya bụ onye njikwa gburugburu ebe obibi mgbe nne ya rụrụ ọrụ dịka onye nkuzi ụlọ akwụkwọ ọkwọ ụgbọala.
Dika nwatakiri, Alicia huru igba aluru nke nne na nna ya - ka di gbara afo abuo. N'ihi nke a, nne ya naanị ya (Marie-Chantal Belfroy) zụlitere ya.
Alicia Aylies - eze nwanyị mara mma - bụ onye nne ya, Marie-Chantal Belfroy zụlitere.
N'iburu nne ya, Alicia Aylies gara ụlọ akwụkwọ na Remire-Montjoly wee gụsịrị akwụkwọ na lycée na ogo mmụta sayensị na 2016.
Mgbe nke ahụ gasịrị, ọ malitere ịmụ iwu na Mahadum French Guiana. Lovehụnanya maka ịme ihe ngosi mere ka ọ hapụ ọrụ iwu.
Foto nke Kylian Mbappe na Alicia Aylies ọnụ anaghị adị na ịntanetị. Na Jenụwarị 2021, ha ka na-eme mmekọrịta ha na nzuzo. Ka anyị wee ghara ichefu, enyi nwanyị Kylian Mbappe nwere ndekọ nke Miss France 2017.
N'oge edere Mbappe's Bio, enweghị akwụkwọ gbasara mgbe mbụ ọ zutere wee malite ịkpa Kylian.
Ọzọ, Alicia Aylies na Mbappe emebeghị nkwa ọlụlụ ma ọ bụ lụọ di na nwunye, ha esoghịkwa nwa ọ bụla dị ndụ ruo ugbu a.
Ebubo Lovehụnanya Akụkọ banyere Camille Gottlieb na Kylian Mbappe:
Asịrị na ọ bụ enyi nwanyị mbụ ya, ọ bụghị nwa agbọghọ mana ọ bụ eze. Camille Gottlieb bụ ada Princess Stéphanie nke Monaco na Jean Raymond Gottlieb, onye bụbu onye nche obí eze.
Ọnye na-bụ Camille Gottlieb? Umu ndi dara na Mourinho
Tupu ha ezute Alicia Aylies, Kylian Mbappe kwuru na ọ bụ Camille Gottlieb. Ọ bụ naanị nwa agbọghọ ka a hụrụ ya na ndị ọgba bọọlụ.
Maka ebumnuche ụfọdụ a na-amaghị ama, njikọ chiri anya ha kwụsịrị na Camille Gottlieb na nwoke ọzọ.
Kylian Mbappe Ndụ Nke Onwe:
Ndị ọgba bọọlụ bụ ezigbo mmadụ tozuru etozu. Kylian nwere àgwà e wuru n'elu ezi nzụlite ụlọ o nwetara site na nna ya na nne ya.
Ọ bụ ụdị onye ahụ ghọtara obere ihe nke ndụ. Mgbe mmadụ kpasuru ya iwe, ọ na-anwa ịghọta ihe ọ na - ekwu - ọnọdụ ha, site n'ịchị ya ọchị kama imeghachi omume.
Ọnye na-bụ Kylian Mbappe pụọ na Football?
Ndụ Kylian Mbappe:
N'agbanyeghị na ọ na-ezochi ihe ndị mmadụ na-eme, ọ na-esiri ya ike izere ụgbọala ya na mgbasa ozi. Kylian Mbappe bụ nnukwu onye na-egwu ụgbọ ala ndị kachasị elu - mmadụ ise na ọnụọgụ (dịka nke Jenụwarị 2021).
N'ihe dị ka nde mmadụ na-agbanye n'akpa uwe ya kwa izu, anyị ji nchịkọta ụgbọ ala ya na 780,000 XNUMX. Carsgbọ ala ndị jọgburu onwe ha na ụgbọala nke Mbappe gụnyere; Ferrari, Mercedes-Benz, Audi, BMW na Range Rover.
Eziokwu Kylian Mbappe. Nlebanye anya na mkpokọta ụgbọ ala ya.
Dika nwatakiri ahu na-enweta otuto, ego ya na-eto eto si otú a mee ka onu ogugu sie ike.
N'ihe karịrị 20 nde Euro na-abanye n'akpa uwe ya, anyị na-eme atụmatụ Mbappe nke 2021 Networth ka ọ dị gburugburu akara nde 120.
Ndị na - agba bọọlụ na - enweta akụnụba gụnyere ọrụ ya dịka ndị ịgba egwu bọọlụ gbakwunyere nnukwu azụmahịa na Nike na EA Sports.
Otu ụzọ Kylian si emefu ego ya bụ site na ịme usoro ezumike kacha mma nke gụnyere ezumike Island Island. O mere ka ọha na eze mara ya na ọ bụ onye na-aga ebe a na-egwu mmiri mgbe niile na ọkachamara na egwuregwu aquatic.
Eziokwu gbasara ọdịnala Kylian Mbappe.
Ndụ Kylian Mbappe Ezinụlọ:
Inwe ezinaụlọ di n'otu nyere aka inye onye mmeri nke World Cup nke 2018 obi ike ọ chọrọ iji nweta ọtụtụ nsọpụrụ na onyinye.
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị gbasara ndị nne na nna, ụmụnne na ndị ikwu Kylian Mbappe.
Kylian Mbappe Foto zuru ezu.
Banyere Nna Kylian Mbappe:
Wilfried bụbu onye ọgba bọọlụ mpaghara nke ghọrọ onye nkuzi na klọb mpaghara ebe nwa ya nwoke malitere ọrụ ya.
Ọ zụlitere ezinụlọ ya n'ihu egwuregwu egwuregwu Léo-Lagrange na-ekwu Taylor, bụbu onye agbata obi ya. N'ịbụ onye Cameroon nwere mgbọrọgwụ Nigeria, Wilfried ka na-asọpụrụ ọdịbendị ya nke Africa.
Nke a pụtara ìhè n’aha ụmụ ya nke anyị ga-ekpughe ebe a.
Nna ọdịnala nyere Kylian Mbappe onye Yoruba (agbụrụ Naijiria) aha etiti Adesanmi nke putara “okpueze dabara m".
Nwa ya nwoke nke ọdụdụ aha Adeyemi - aha ndị Yoruba ọzọ nke Nigeria pụtara na “okpueze kwesiri gị".
Nna na-aga nke ọma bụ nwoke nwere ọhụụ, onye na-enye ndụmọdụ na-achọsi ike maka njikwa football na mkparịta ụka. Ọ na-enyocha mkpebi ọ bụla nwa ya mere ma na-eme ka ọ dabere.
Kylian Mbappe na nna ya, Wilfried abịawo ogologo ụzọ.
Banyere mama Kylian Mbappe:
Amụrụ na afọ 1974, Fayza Mbappe Lamari (nke akpọrọ El-Amari na Arabic) bu onye n’abụ bọọlụ bọọlụ nke nwere ọganiihu na AS Bondy ọgbakọ nke mbụ site na ngwụcha 1990 ruo n’isi 2000s.
Nne Kylian Mbappe si n'ezinụlọ football ka nna ya na-egwu bọl na mpaghara Bondy Paris.
Ruo taa, Fayza bụ akara ngosi nke klọb bọọlụ nke obodo French ya. Nke a bụ nwanyị dike mgbe ọ nọ na-arụ ọrụ dị ka onye aka nri.
Zute nne Kylian Mbappe - Fayza Lamari - n’oge ọ bụ kpakpando aka.
N'ịkọwa Fayza na ụbọchị egwu ya, onye bụbu onye otu Bondy onye otu Jean-Louis Kimmoun gwara 'Le Parisien;
“Ọ tolitere na nso ụlọ egwu bọọlụ aka anyị. Ọtụtụ ụmụnne Fayza gbara bọọlụ. N’ụlọikpe, ọ bụ onye ọgụ. Mgbe ụfọdụ ihe na-adị njọ n'oge ọ bụla Fayza zutere ndị na-emegide ya. ”
Na ederede onwe gị, Fayza bụ onye mara mma nke na-agbaso bọọlụ aka.
O nwere obi uto ile nwa ya nwoke ka o to ezi nwa nwoke ma kachasị mkpa, otu n'ime ndị egwuregwu dị mkpa n'ụwa.
Enwere ezigbo mmekọrịta dị n'etiti Kylian na Mum Algerian.
Banyere Mbamụnna Mbappe:
Nọmba atọ, anyị ga-agwa gị gbasara bruvs. Ihe mbụ, anyị na-ajụ… enwere ihe ọ bụla dị n'ụwa dị ka ezigbo mmekọrịta dị n'etiti ụmụnna na-egwu egwuregwu?
Eee, e nwere na ihunanya n’etiti ato ndia.
Zute Brothersmụnna Kylian Mbappe. Jires Kembo-Ekoko (n'aka nri) na Ethan Adeyemi Mbappe (n'etiti).
Banyere Jires Kembo-Ekoko - Nwanne nwoke okenye nke Kylian Mbappe:
Onye amụrụ French Congo na-agba bọọlụ na 8th nke Jenụwarị 1988 na Kinshasa, Zaire (nke bụzi Congo).
O ketara ekworo bọọlụ ya site n'aka papa ya nke na-abụghị By nna Kylian Mbappe, Wilfried. Nna Jires Kembo-Ekoko bụ Kembo Uba Kembo. Ọ bụ onye ọkpụkpọ lara ezumike nká na-egwuri egwu na 1974 FIFA World Cup maka otu ndị DR Congo.
Kembo Ekoko kwagara Europe mgbe ọ dị afọ isii wee biri na Bondy (France) ya na nwanne nna ya na nwanne ya nwanyị nke okenye.
Ọ bụ nne ya kpebiri iziga ya na France maka agụmakwụkwọ, ebe nne na nna ya nọgidere na Congo.
Mgbe ọ bụ nwata, Kembo Ekoko bụ ezinụlọ Mbappé kuchiri ya. Mazị Wilfried Mbappe bụ onye nlekọta iwu nke Jires, nwa enyi ya nwụrụ anwụ.
Kylian Mbappe nwanne nwoke buru ibu bụ 10 afọ karịa ya. Ọ bụ onye egwu gosipụtara maka Clairefontaine, Rennes, Al Ain (UAE), El Jaish, Al Nasr na Bursaspor (Turkey).
Kylian na-ele Jires anya dị ka arụsị mbụ ya. Ha adighi adi mfe ma jikọtara onu.
Kylian na nnukwu nwanne - Jires Kembo-Ekoko dị ezigbo nso.
Banyere Nwanne nwoke nke Mbappe - Ethan Adeyemi Mbappe:
Amụrụ na afọ 2005, ọ bụ nwanne nwanne Kylian na nwa nwoke Fayza Lamari na Wilfried.
Nna nna ya nyere ya aha nna ya bụ Adeyemi maka ịkwanyere mgbọrọgwụ ya na Naịjirịa ugwu nke pụtara “okpueze kwesiri gị.”
Kylian kwere nkwa na ọ gaghị ekwe ka nwanne ya nwoke, Ethan Adeyemi kpafuo n'ọchịchịrị naanị ya.
Ethan dị afọ 7 tọrọ karịa nwanne ya nwoke, Lotton. Onye na-eto eto bụ ihe mere Kylian ji eme ememe ihe mgbaru ọsọ ya site n'itinye aka ya na mkpịsị aka ya.
PSG kpakpando na-ekwu na ọ bụ nwanne ya nwoke nke malitere usoro ememme ọ bụla ọ ga-eti ya na FIFA.
Kylian nwere nkwekọrịta na Monaco mgbe ọ kwere ka Ethan Adeyemi bụrụ mascot ya. N'ikwu okwu banyere otu mkpebi si bịa, Mbappe kwuru otu oge;
“Ethan chọrọ ya - na ọ ga-abụ nnukwu oge. Ọ na-agbaji isi m n'ụlọ. Ọ sịrị “Kpọrọ m, kpụrụ m”, ya mere m siri “Ọ dị mma, aga m akpọrọ gị, bịa oonn…”
Kylian mezuru otu UCL chọrọ nwanne ya nwoke, bụ Ethan Adeyemi.
Banyere nna nna Kylian Mbappe:
Na Cameroon, nkwenye siri ike na Maréchal Samuel Mbappé Léppé bụ nwa nwa nke PSG Striker.
Onye egwuregwu bọọlụ lara ezumike nká (onye nwụrụ na 1985) bụ onye ama ama maka ịbụ onye ọchịagha izizi buliri iko African Champions Clubs na oge 1964/65.
You na-ahụ myirịta dị n'etiti Kylian Mbappe na nna nna ya kwere nkwa- Maréchal Samuel Mbappé Léppé?
Maréchal Samuel Mbappé Léppé mụrụ na 1936. Ọ bụ onye ama ama maka ịbụ onye na-eti Orix Bellois, Douala egwu.
Kylian boro Grandad ebubo na ọ meriri "African Legend" nke African Football Confederation nyere na 2015.
Ndị ikwu Kylian Mbappe:
Zute ụmụ nwanne nna Kylian Mbappe. A na-ese Pierre Mbappé n'aka ekpe.
N'ime ha, onye kachasị ewu ewu bụ Pierre Mbappé bụ nwanne Wilfried. Amụrụ na 18th nke Septemba 1973, ọ bụ onye nkuzi bọọlụ na-achịkwa US Ivry na Stade Lavallois otu mgbe.
Pierre Mbappe, nwanne nna ama ama nke Kylian Mbappe welitere nku anya ole na ole site na ikpughe na nwa nwanne ya na-etinye oge dị ukwuu na-ele egwuregwu Chelsea.
Naanị onye ikwu a ma ama na Cameroon bụ Christian Dippah. O jiri oge ndụ ya niile biri na mba West Africa ma were obi ọjọọ were nwanne nna ya.
Kylian Mbappe Eziokwu Eziokwu:
Chịkọta akụkọ ndụ anyị, anyị ga-eji ngalaba a gwa gị eziokwu na-atọ ụtọ ị na-amabeghị gbasara PSG.
Eziokwu # 1- Mmalite nke Donatello Nickname:
Ihe kpatara eji akpọ Kylian Mbappe Donatello.
Na 2017, ihe nkiri a na-eme n'azụ mere n'otu oge n'etiti Neymar na Kylian.
Mgbe ị na-enyocha ọnọdụ ahụ, ụkwụ mba Fayza nke Mbappe enweghị obi iru ala na ụzọ nwa ya nwoke na-anọgidesi ike iji tụnyere Donatello - Teenage Mutant Ninja Turtle.
Ọ na-atụ egwu na ọbụna Dani Alves soro na Neymar ka na-akparị Kylian na aha njirimara nke bịara n'ihi ọdịdị ya.
Gburugburu November (2017), Thiago Silva nyere onye mbu onyinye onyinye ekeresimesi. Amabeghị na Neymar nọ n'azụ ọdịnaya nke onyinye ahụ.
Mbappe mepere igbe ahụ wee hụ ihe nkpuchi Teenage Mutant Ninja Turtle. Tupu ya amara ihe na-eme, vidio a malitere ịza.
Ndị na-egwu egwu malitere iyi uwe dị ka mbe na-akpata mbuso agha pitch. Na mbụ, Mbappe chere na njakịrị ahụ agabigara oke, na achịrị ya afọ agwụla ya. Gị, o mesịrị nakwere aha aha Donatello.
Onyinye a mụrụ aha Kylian Mbappe nke Donatello.
Eziokwu # 2 - Akụkọ Kylian Mbappe Drogba:
N'otu oge, kpakpando PSG nwere ihe mgbu mgbe akụkọ akụkọ Chelsea leghaara ya anya.
Naanị gị Didier Drogba's kpatara, ihe omume ahụ mere mgbe 2009 Chelsea meriri na Njikọ Njikọ nke ikpeazụ na Barcelona.
Didier Drogba leghaara Kylian Mbappe anya. Obi dị m ụtọ, ọ kwụsịrị iji obi ụtọ - 10 afọ mgbe.
Mgbe egwuregwu ahụ gasịrị, Kylian Mbappe gbara ọsọ Drogba iji nweta onwe gi ma Drogba leghaara ya anya. Akụkọ akụkọ Chelsea nọ na-agba mbọ na Ref ma jụ ịnabata arịrịọ maka selfies.
Afọ iri ka nke ahụ gasịrị (2019), Mbappe hụrụ onwe ya na ọkwa Ballon D'or Didier Drogba. Oge a, akụkọ akụkọ Chelsea mechara mezuo ụgwọ afọ 10 site n'inye Mbappe foto ọ chọrọ na 2009.
Eziokwu # 3 - Nkwụ ụgwọ ụgwọ ọnwa na ego ole ọ na-enweta kwa sekọnd:
Inweta na dollar US ($)
Nweta ego na GBP (£)
Kwa Afọ: £ 20,050,800 $ 27,222,972 £ 18,124,218.48
Ọnwa kwa: £ 1,670,900 $ 2,268,581 £ 1,510,351.54
Kwa Izu: £ 385,000 $ 522,715 £ 348,007
Kwa :bọchị: £ 55,000 $ 74,674 £ 49,715
Kwa elekere: £ 2,292 $ 3,111 £ 2,071
Nkeji nkeji: £ 38 $ 52 £ 34
Sekọnd: £ 0.6 $ 0.8 £ 0.57
Kemgbe ị malitere ilele Kylian Mbappe'Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
Citizen Nwa amaala France ga-arụ ọrụ maka afọ 7 na ọnwa 6 iji nweta ụgwọ ọnwa Kylian Mbappe kwa izu.
Eziokwu # 4 - Okpukpe Kylian Mbappe:
Gini mere Kylian Mbappe ji eyi uwe dika onye Alakụba? Anyị nwere azịza ya.
Ndi Bondy bu onye alakuba? … Fans ajụọla nso nso a mgbe ha hụsịrị foto uwe ejiji mbappe ndị Alakụba na-ekesa ịntanetị.
Ihe mbụ, Wilfried papa ya ka ga-agbanwe Islam. Dika ozo, Fayze azaghi aha nna Muslim.
Nke a pụtara na ohere nke Kylian Mbappe nke okpukpe bụ obere. Ọ bụ Onye Kraịst site n'okwukwe.
Mgbe anyị nyochachara nke ọma, anyị chọpụtara na onye PSG na-eyi uwe ndị Alakụba n’ihi omenala obodo ya.
Ndị isi ojii Ndị Kraịst nọ na France enweghị njikọ dị ukwuu na Kristianị n'ihi nkewa ha na-eche ihu site n'aka ndị Kraịst ibe ha. Maka nke ahụ, ihe ka ọtụtụ n'ụmụ amaala ojii jiri ejiji nke Islam.
Eziokwu # 5 - Computara Kylian Mbappe Ogo ka ndi ozo di elu:
LeBron James dị elu 5 ụkwụ 9 ma ọ bụ (2.06m) n'ịdị elu. N'aka nke ọzọ, Giannis Antetokounmpo na-eguzo na 6 ụkwụ 11 inch (2.11 m) ogologo ma e jiri ya tụnyere Mbappe 5 ụkwụ 10 sentimita (1.78 m).
Nke bụ eziokwu bụ, a ghọgbuola ndị na-agba bọọlụ. Kylian Mbappe nwere ogologo ụkwụ nke mere ka anyị chee na ọ toro ogologo karịa ka ọ dị. Ọ bụ n'ezie.
Elu nke Kylian Mbappe ma e jiri ya tụnyere ndị nkata a ma ama.
Eziokwu # 6- Ihe ọ na-enweghị na FIFA:
Ọ bụ ezie na egwuregwu na-agọzi ya ọtụtụ àgwà dị mma, Kylian Mbappe abụghị nke ahụ zuru oke.
O nweghi iwe, FK ziri ezi, ntaramahụhụ na ịgafe ogologo oge. Onye na-aga n’ihu bụ onye kpakpando 2020 na-enwe FIFA nwere àgwà yiri ya Sadio Mane.
Daalụ maka iwepụta oge niile ịgụ nkenke Biography nke Kylian Mbappe. Anyị nwere olile anya na ọ nyere gị mmụọ nsọ ikwere na ọ ga-ekwe omume anyị ịme akụkọ nke gị n'onwe gị.
Nke a kwesịrị ịbịa mgbe anyị tinyere ọzụzụ, njide onwe onye ma nọgidesie ike na-arụ ọrụ nke ọma.
N’okwu ha na omume ha, ọ kwesiri ka anyị jaa Wilfried na Fayza Lamari mma. Ndị nne na nna Kylian Mbappe mere ka nwa ha chọpụta ihe ndụ pụtara tupu ya agbanye 16.
N’agbanyeghi onodu a, ezinulo ahu chere na Bondy afọ ole na ole ka amuchara ya, ha anaghi ekwe ka ndi obodo obi ojoo nke Bondy chịa akara aka nwa ha.
Jires Kembo-Ekoko nwere ike ọ gaghị enwe ezigbo ọrụ, ọ ghọrọ arụsị mbụ nke Kylian n'ihi nnukwu nwanne. Ugbu a, ọrụ ahụ esila n'aka Kylian gaa Ethan Adeyemi onye na-atụ anya ya n'ọdịnihu.
N'iburu n'uche na ọganihu ugbu a adịghị egosi oke agụụ ịgbatị oge PSG ya, anyị kwenyere Ọdịnihu Kylian Mbappe nwere ike ịbụ ebe dị anya na Paris - akụkọ leparisien.
Ihe ọ sọrọ ya bụrụ, otu ihe doro anya. A ga-ahọrọ Kylian Mbappe iweghara uwe nke onye ndu bọọlụ Lionel Messi na Cristiano Ronaldo.
Ndị otu anyị gbara mbọ maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ ebe ha debere Memoir nke Mbappe. Ọ bụrụ na ị hụ ihe na-adịghị ele anya n’isiokwu anyị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị.
Ma ọ bụghị ya, gwa anyị na ngalaba nkọwa ihe ị chere gbasara nnukwu French. Iji nweta nchịkọta nke Kylian Mbappe's Bio, jiri ọkwa Gallary na Wiki n'okpuru.
NTKWU NDOG NỌRỌ AHOG
Aha zuru ezu: Kylian Adesanmi Lottin Mbappé.
aha otutu: Donatello.
Ezigbo Net: Ihe ruru £ 120 nde (2021 stats).
Ụbọchị ọmụmụ: 20 December 1998.
Age: 23 afọ na ọnwa 1.
Ebe amụrụ onye: 19th arrondissement nke Paris.
Ndị nne na nna: Wilfried Mbappe (Nna) na Fayza Lamari (nne).
Ụmụnna: Jirès Kembo Ekoko (nwanne nkuchi), Ethan Adeyemi Mbappe (Nwanne nwoke nke obere).
Nwanna nwanyị: Ọ dịghị onye.
Nke bụbu nwaada nwanyị: Camille Gottlieb kwuru.
Nwata nwanyi a: Chibuzor Okonkwo
Ezinụlọ ezinụlọ nna: Wilfried Mbappe nwere Cameroona na mgbọrọgwụ Nigeria.
Ezinaụlọ nne na nna: Fayza Lamari nwere mgbọrọgwụ Algeria - sitere na Kabyle.
Ọrụ Ndị Nna: Onye bụbu onye egwuregwu bọọlụ na mpaghara, onye nkuzi (nkuzi) na onye na-agbara bọọlụ.
Ọrụ Ndị Nne: Onye egwu bọọlụbụbụbụl. Ugbu a handball Coach.
Deede: Pierre Mbappé, Christian Dippah wdg.
Aunti: NA NA
Ndị nne na nna ochie: Maréchal Samuel Mbappé Léppé (Kwuru na ya).
Obodo: Bondy, mgbago mgbago ugwu ọwụwa anyanwụ nke Paris, France.
Education: Lọ akwụkwọ Music, AS Bondy na Clairefontaine.
Ihe akara Zodiac: Sagittarius.
Ogo na igwe: 1.78 m.
Elu na Inkwụ na Inches: 5 ft 10 na.
Ogologo na centimeters: 178 sentimita.
Ibu ibu na kilogram: 73 n'arọ (Ihe dị).
Ibu ibu na Pound: 160.937 lbs (Mbido).
-arụ: Bọọlụ bọọlụ.
Egwuregwu Ọnọdụ: Ntuziaka na aka nri.
haziri nzukọ: Nike
Enwere m oge m ga - esi na - eme ka ọ bụrụ na m na - eto eto
Lottin Mbappe BỤ AZỤGHỊ IHE. Na-agakwuru ndị nne ya maara mma. MBAPPE BỤ NDỤ M BỤ MGBE M BỤ NA MGBE MGBE Ọ BỤLA, I NA-EME MODELE. ABỤ M SOUTH AFRICAN M GỤKWU ENGLISH, AFRIKAANS, ZULU NA IM NA-AHỤ AKWỤKWU EKWU NDỊ EKWU NDỊ ANYỊ NA-EKWU NDỊ NA-EME M
Ibu aka nye nne na nna! Mbappe M hụrụ playstyle gị n'anya, gbasie ike, ị na-agba ọsọ dịka igwe kwụ otu ebe, a dịka m wow! Mgbe mbụ m hụrụ ka ị na-egwu egwu, ahụrụ m Thierry Henry, ahụrụ m Ronaldinho, arụsị football m. Niile kachasị mma na ụgbọelu gị.
Nke a bụ ebe kachasị mma ịgụta ihe gbasara ndụ nke ndị a buru ibu nakwa ndị na-agba ụkwụ ukwu. M na-agụkwa ọzọ isiokwu na ọ bụ nnukwu.
Mbappe nwere ọtụtụ ihe na akụkọ ya. Amaghị m na ọ zutere Christiano n'oge ọ dị obere. Ọ dị mma ma anyị na-eche ka arụmọrụ sitere n'aka ya bịa n'oge ọzọ
Mbappe nwere ndụ ezinụlọ dị iche ma e jiri ya tụnyere egwuregwu ndị ọzọ. Ụdị dị ka ọnụnọ ya na gọọmenti rụrụ. Ka o sina dị, o meela ọtụtụ ihe ma na-enwe olileanya ịga ogologo.
Nwa agbọghọ dị na Dominque
Enwere ọtụtụ ihe m gụrụ, nke m anụtụbeghị. Echere m na ọ bụ obere akụkọ, mana enwere m ọtụtụ ihe mere na ndụ Mbappe.
Dị ka oge niile, ọ dị mkpa inwe ndidi n'ihe ọ bụla ị na-eme. Ihe ukwu n’eme mgbe ichere. Enweghị ọsọ ọsọ. Ọzọkwa, dị ka o kwuru, ọ bụ ịrụsi ọrụ ike dị mkpa. Na-arụsi ọrụ ike n'ihe ọ bụla ị na-eme.
Ọ dị mma na ị gụọla ezigbo akụkọ banyere Mbappe. Naanị m hụrụ isiokwu ahụ ma egbughị oge ịgụ ya. Amụtawo m ọtụtụ ihe n’aka ya.
Anyị gafere ọtụtụ ihe tupu anyị enweta. Ọ dịghị mfe iru n'elu na-enweghị nnukwu nraranye nke oge gị. Ọ na-achọkwa ịrụsi ọrụ ike na agụụ.
Lee, ihe niile nwere ihe kpatara ya. Echere m na ọ bụ site n'igwe ka ọ na-eme ihe mgbaru ọsọ ya na ogwe aka ya gafere. Ọ na-apụta na e nwere ihe kpatara ya.
Ndị nne na nna na-arụ ọrụ dị ukwuu n'ịhụ na ụmụ ha emezuola nrọ ha ma ọ bụ nkà ha. Ọ dị mma ịkwado ụmụ anyị.
Onwere ihe idiri mbo ike ime ihe obula ichoro. Mbappe dị mma ma jide n'aka na ọ na-aga ebe dị anya.
Ọ dị mma ịgụ akụkọ akụkọ nwata. Enwere ọtụtụ ihe ịmara gbasara ndị na-abịa abịa na ndị ọgba bọọlụ ndị a. Ọ dị mma ịgụ.
Kylian dị ka nwa okorobịa nwere ezigbo isi na ubu ya. Obi dị m ezigbo ụtọ na nna ya nwere ike ịmalite ịzụ ya mgbe ọ dị afọ isii. Ugbu a, ịrụsi ọrụ ike na-akwụ ụgwọ!